Ebee iri nri na Madrid? Lọ oriri na ọ recommendedụ recommendedụ 9 kwadoro na obodo | Akụkọ Njem
Madrid bụ nnọọ cosmopolitan obodo na a onyinye gastronomic kacha mma. Ohere di na enweghi ngwụcha ma anyị nwere ike ịsị na ịnwere ike ịnwale efere site na kọntinenti ọ bụla n'isi obodo ahụ. Agbanyeghị, mgbe onyinye ahụ sara mbara nke siri ike ịhọrọ. Ọ bụrụ na ị esighị na Madrid ma ị na-eleta, ị nwere ike ịtụ ụjọ ịnọdụ ebe na-ezighi ezi wee kwụsị ịkwụ ụgwọ nri.
N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị si n'obodo ahụ maọbụ ọ bụrụ na ị na-aga enyemaka, ị nwere ike iri nri n'otu ebe dị ka mgbe niile. Ọ bụrụ na ị furu efu ma ọ bụ ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ebe ọhụụ, ị nọ n'udo Chọrọ ịma ebe ị ga-eri nri na Madrid? Na nke a, m na-akọrọ gị ụlọ nri 9 akwadoro n'obodo.
1 Ndị Escarpín
3 Houselọ elu 11
4 Onye isi obodo Taqueria El Chaparrito
6 Harlọ Lhardy
8 Tavern na Media
9 Angel Sierra Sierralọ
Chọta ụlọ oriri na ọ restaurantụ whereụ ebe ị nwere ike iri nri nke ọma na ọnụ ala dị ala n'etiti Madrid nwere ike ịbụ ihe ịma aka. The Escarpín na-bụ Asturian cider ụlọ nke ndụ niile Ma ọ bụ otu n'ime ebe ị ga-ejedebe afọ gị iji nweta ọnụahịa dị mma. Ọ dị na Calle Hileras, dị nso na Mayor Plaza. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ meghere ọnụ ụzọ ya na 1975 wee ghọọ ebe a na-emezi nke oge a, ma na-echekwa ọdịnala ọdịnala ya.
The Escarpín na-enye a super zuru ezu kwa ụbọchị menu, nke mbụ na nke abụọ, maka naanị 12 euro. Na mgbakwunye, menu ya dị iche iche, ị nwere ike ịhọrọ ọmarịcha nri ma ọ bụ họrọ maka nri Asturian. Ọ bụrụ na ị gaa, gbaa mbọ nwalee cachopo pụrụ iche chiiz atọ, naanị n’ụlọ, na agwa yana klam, nke kachasị mma.
Ahuru m humsh n'anya. N'ezie, enwere m ike ịnara ya ụbọchị niile nke ndụ m na-enweghị nkụda mmụọ. Agbanyeghị, echeghị m na enwere ụlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nke ga-eleba anya na menu ya dum na efere a, nke sitere na Middle East. La Hummuseria, nke ndị di na nwunye Israel mepere na 2015, awade ezigbo nri na vegan nhọrọ nke hummus bụ protagonist. Yabụ, ọ bụrụ na ị hụrụ akwụkwọ nri n'anya, na-esi nri, na, hummus, ị gaghị echefu ụlọ nri a! Ọ bụ ngosipụta na ị nwere ike iri nri, nwee ọmarịcha ụtọ na ịnwe nri kwesịrị ekwesị.
Ebe ahụ dịkwa mma nke ukwuu. Oge a mma, osisi na Nchikota agba mere La Hummuseria ebe di nma nke oma ị na-eku ume ọma vibes.
Houselọ elu 11
Ọ bụrụ na ị na-agabiga ma ọ bụ ọ bụrụ na, dị ka m, ị hụrụ obodo ahụ n'anya, ị gaghị ahapụ Madrid na-enweghị ịnụ ụtọ otu n'ime echiche kachasị mma nke isi obodo. Enwere ụlọ oriri na ọ hotelsụ hotelsụ, na elu ala, nwere a teres eri ma na-a aụ ihe ọ drinkụ .ụ. Ọ bụ ezie na ebe ndị a anaghị adịkarị ọnụ ala, ọ bara uru ịga site n'oge ruo n'oge.
Ofel nke Hotel Iberoestar las letras, Attic 11, bụ ọkacha mmasị m. Site na ikuku ndị ntorobịa na enweghị nchekasị, Atgba 11, bụ ebe kachasị mma iji hụ ọdịda anyanwụ, nwee mmanya na-ege ntị ma gee egwu dị mma. Na Satọde na Fraịdee, ha na-ahazi nnọkọ DJ, atụmatụ dị ukwuu ma ọ bụrụ na ị na-achọ inwe obi ụtọ nwa oge na ebe ọhụụ na nke naanị.
Akụkụ ọzọ na-adọrọ mmasị bụ nri ya, dabere na nri Mediterranean na productos Gọọmet nke mba. Emebere efere ahụ site na onye isi nri Rafael Cordón ma kwadebe ya na a Gastro Ogwe dị n'èzí, na-ele onye ahịa ahụ anya.
Onye isi obodo Taqueria El Chaparrito
Mgbe ụfọdụ, anyị chọrọ ịdị iche na-agbalị ihe ọhụrụ, dabara nke ọma Madrid bụ ezigbo obodo ime otú ahụ. Maka 2020 - 2021 akpọrọ ya Ibero-American Capital nke Gastronomic Culture. Ya mere ọ bụrụ na ị na-amasị nri latinEchegbula, ịkwesighi ijide ụgbọ elu kwa izu ọ bụla iji nwee obi ụtọ.
Onwe, m omiiko banyere Mexico gastronomy na m gara dị iche iche taquerías na Madrid. Obi abụọ adịghị ya, ọkacha mmasị m bụ "El Chaparrito Mayor". Ọ bụ ebe, dị ihe dị ka 200 mita site na Plaza Mayor ma dị ọnụ ala. Ha na-enye tacos na 1 euroYa mere, i nwere ike nwalee ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ menu niile. Abiala m Mexico ma enwere m ike swearụọ iyi na nri si ebe a na-akpọtụrụ gị.
Ọ bụrụ na ịnọ n’etiti na ịchọghị imefu nnukwu ego, atụmatụ a na-atọ ụtọ. Ebe ahụ mara ezigbo mma, A na-eji agba agba agba agba ya mma na ya na nkọwa ndị ị ga - eme njem. Ndị ọrụ ahụ dị ezigbo enyi. Ọ bụrụ na ị nwere obere oge, ana m akwado ka ị nọdụ na mmanya, nye iwu ụfọdụ margaritas na tacos ole na ole, cochinita pibil na kpochapụwo tacos al pastọ.
Ọ bụrụ na ị ka chọrọ mee njem site na uto, Will ga-ahụ Miyama Castellana n'anya. Openedlọ oriri na ọ Japaneseụ Japaneseụ ndị Japan a mepere na Madrid na 2009 na, kemgbe ahụ, ọ jisiri ike merie ndị hụrụ nri Japanese.
Nri na Paseo de la Castellana, ebe, minimalist and cozy, dị mma iji soro ndị enyi ma ọ bụ ezinụlọ rie nri ogologo oge. Onye siri nri, Junji Odaka, jisiri ike jiri menu ọtụtụ omenala ndị Japan, na-enye ya mmetụ ọhụụ na ọmarịcha nlekọta anya.
Lọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ ahụ abụghị nke dị ọnụ ala, mana maka ezigbo nri dị oke ọnụ, ọnụahịa adịghị oke oke. N'ime ihe dị mkpa nke menu ya bụ: wagyu anụ, ndị sashimi nke ehi, ihe nigiri nke tuna na, n'ezie, ndị Sushi.
Mgbe ị rutere n’obodo ọhụrụ, ihe na-adọrọ mmasị bụ ịnwale ụdị nri ya. Ihe Madrid stew Ọ bụ ọdịnala kachasị nke gastronomy nke obodo, yabụ, ọ bụrụ na ị esiteghi na Madrid, ị gaghị echefu ohere ịnwale ya.
E nwere ọtụtụ ebe ha na-eje ozi dị mma, ma ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ gị… gịnị ma ị gaghị eme ya na akụkọ ntolite? Casa Lhardy, mita ole na ole site na Puerta del Sol, tọrọ ntọala na 1839. Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ ,ụ, nke a na-ewere dị ka nke mbụ na Madrid niile, na-echekwa mma nke narị afọ nke XNUMX ọbụnadị na ọ pụtara ka akpọtụrụ aha ya na ọrụ nke ndị edemede nke ogo Benito Pérez Galdós ma ọ bụ Luis Coloma. Yabụ ọ bụrụ n'ịchọrọ inweta ahụkarị ọdịnala Madrid, ebe a bụ naanị ihe ị na-achọ.
Banyere stew, ị ga-ahụ na ọ bụ sayensị ka ị rie ya. Na Casa Lhardy, ha na-efe ya ụzọ abụọ, nke mbụ ofe na nke ọzọ. Achọrọ m iri ya ọnụ, echere m na, maka ọtụtụ ndị bi na mpaghara, nke a ga-abụ nnabata dị egwu. Ma, ihe ọ bụla ị na-eri, nsị ahụ na-atọ ụtọ ma na-adị oke n’oge oyi.
Ọ bụrụ n ’ịga n’ihu na-ekwu maka ụdị nri anyị na - eri, anyị enweghị ike ichefu sanwichi calamari. Ọ nwere ike ịdị ka nchikota "osisi" maka ndị anyị na-esiteghị n'obodo ahụ, ya mere, enwere ndị na-anaghị anwa anwa ịnwa ya, mana ana m agwa gị na ọ bụ ịnwụ maka ya. E nwere ọtụtụ ogige gburugburu Plaza Mayor Ha na-ejere ya ozi, n'agbanyeghị na ha na-ejupụta na ndị mmadụ n'ihi na ọ bụ ebe ndị njem nleta na-eme njem, ọ bara uru ichere ma rie sanwichi gị mgbe ị na-agagharị n'obodo ahụ.
Ogwe La Campana bụ otu n'ime ihe kachasị ewu ewu na Madrid ma ha na-ere Calamari sandwiches naanị 3 euro. The ọrụ bụ nnọọ ngwa ngwa na biya biara mma Kedu ihe ọzọ ị ga - achọ!
Tavern na Media
Enwere ihe na-atọ ọchị karịa ezigbo nri abalị ejiri mmanya? Taberna y Media bụ ezigbo ụlọ oriri na ọ toụ toụ iji ju onye gị anya, ma ọ bụ onye ọzọ ị fancy, na magburu onwe nri na-akpachi anya na pụrụ iche gburugburu ebe obibi. Ihe bụ ihe ọzọ, ọ dị mma n'akụkụ nke Retiro Park, otu n'ime ebe kachasị akara ngosi na Madrid. Ighagharia site na ahihia ahihia bu oke ugwu. Onweghi uzo di nma iji wedata nri!
Restaurantlọ oriri na ọ restaurantụ restaurantụ nwere akụkọ mara mma nke ukwuu n'azụ ya, ọ bụ ọrụ nna na nwa nwoke, José Luís na Sergio Martínez, ndị sonyeere echiche ha iji mepụta oghere raara nye tapas na nri nri.
Na mmanya ya na n'ime ụlọ iri nri, ha na-enye ngwaahịa dị elu, nri ndị ọdịnala nwere mmetụ nke nri mara mma. Mkpụrụ osisi braised na akwụkwọ nri na koko, salad ụlọ na tripe nwere ekpomeekpo mara mma. Ọ bụrụ na ị dị ka m, onye na-ahapụ obere ohere maka eji megharịa ọnụ, ị gaghị enwe ike iguzogide ịtụ creamy anise toast na vanilla ice cream.
Angel Sierra Sierralọ
Vermouth bụ ụlọ ọrụ na Madrid, ọ bụrụ n'ịchọrọ inwe mmetụta dịka Madrilenian ọbara dị ọcha, ị gaghị echefu oge aperitif. Chọta ezigbo vermouth na Madrid dị mfe, e nwere saịtị ndị na-enye ụdị dị iche iche. Ọmụmaatụ, La Hora del Vermut, na Ahịa San Miguel, nwere mkpokọta akara iri asatọ sitere na mba. Ọ bụ ụlọ nsọ a raara nye ihe ọ thisụ thisụ a nke nwekwara ezigbo tapas na nchịkọta nhọrọ.
Agbanyeghị, a bụ m nke mpaghara nke na-agbapụta ọdịnala na, ị toụ vermouth, ọ dịghị ihe dị mma karịa ụlọ obibi mara mma nke nwere gbọmgbọm anya. La Taberna de Ángel Sierra enwere ike ebe kachasị mma m hụtụrụla n'obodo ahụ. Emi odude ke Chueca, ọ pụtara ìhè maka ịchọ mma ya. Epeepe ndị a tụkọtara na mgbidi, osisi gbara ọchịchịrị, uko ụlọ jupụtara na foto na eserese, ihe ncheta a haziri ahazi na taịl nke Cartuja de Sevilla na-eme ka ọ bụrụ oghere pụrụ iche nke kwesịrị ileta.
Madrid na-atọ ụtọ nke ukwuu ma ejiri m n'aka na ị ga-ahụ ya n'anya. Enwere m olile anya na ndepụta a nke ụlọ oriri na ọ recommendedụ 9ụ XNUMX a tụrụ aro na obodo ga-enyere gị aka ịnụ ụtọ gastronomy ya, mana ọ bụrụ na ịchọrọ ịkacha eleta nleta gị na isi obodo, enwere ike kpalie gị na ndepụta a Ihe 10 kachasị mma ime na Madrid.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Spain obodo » Madrid » Ebee iri nri na Madrid? 9 akwadoro ụlọ nri na obodo
Akwa post. Iji chebara ya echiche na njem ọzọ m ga-aga Madrid.
Ihe ị ga-eme na Dominican Republic